Ukuncipha I-Blog: Ama-Netglobalbook | Martech Zone
Ukuncipha I-Blog: Izincwadi ze-Netglobal
NgoLwesine, July 19, 2007 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Olandelayo ohlwini lwezincomo zebhulogi nguLinda Lee nebhulogi yeNetglobalbooks. ULinda ungusomabhizinisi nomama ongayedwa onezingane ezi-3 ezinhle. ULinda waqala ukuthengisa izincwadi namathoyizi namathikithi ekhonsathi ku-eBay, futhi lokhu kuholela ekubhaleni nasekuthengiseni ama-ebook nokwakha amawebhusayithi.
Ibhulogi kaLinda yinhle - enetimu ye-Paintbrush ka-Antbag.
Nawa amathiphu akho ebhulogi, uLinda:
Ngingancoma ukuthi uthuthukise inguqulo yakho ye- I-WordPress enguqulweni yakamuva neyedlula zonke.
Ngithole ama-oddities ambalwa netimu yakho. Ekhasini lakho eliyinhloko lenkomba, okuthunyelwe kwakho kuqala ngo-> p /> futhi kubonakala kunamathegi wefonti anamandla aziphindayo ngemuva kokuqukethwe kokuthunyelwe ngakunye.
Kufanele ukwazi ukuthola umaki wefonti onamandla ngokuhlela ikhasi lakho lenkomba eliyinhloko kusihleli setimu ye-WordPress. Ithegi le-p funky lingaba kokuqukethwe kwakho.
Unesixhumanisi esifile esithangamini esiku-blogroll yakho kubha yakho eseceleni. Uma ufuna isithangami esisebenza ku-WordPress, ungazama bbPress. Umngani wami wokubhuloga uTony Chung ulayishe futhi wasebenza kahle kusayithi lakhe, Geekwhat.
Ngiyabona lapho ubhala ukuthi unenhlanganisela yamathegi endima (> p>) namakhefu wolayini (> br />). Ukwephuka komugqa kuzophula umugqa bese kukuqhubekele kulayini olandelayo ngaphandle kwephedi noma imajini. Isigaba; noma kunjalo, ishiya i-padding enhle ngaphezulu nangaphansi kwendima yakho yokuqukethwe. Izigaba zikweqa okuqukethwe kahle - zenze ukuthi okuqukethwe kwakho kufundeke kalula. Ngingakugwema ukugqashuka kolayini.
Awekho amathegi wedatha we-meta kunhlokweni wakho. Imininingwane ye-Meta isetshenziswa Izinjini Zokucinga ukubonisa igama elingukhiye nemininingwane yokuchazwa mayelana nesayithi lakho nekhasi lakho ngalinye. Ngisikisela kulayishwa ama-plugins ambalwa ukukusiza ukusetha amagama akho angukhiye namathegi emeta wencazelo!
Isithonjana sakho se-RSS feed sime kahle! Ukuze uqiniseke ukuthi uheha ukufundwa nge-RSS feed yakho, ngincoma ukuthi ubhalisele FeedPress futhi ulayishe i-plugin ye-Feedburner WordPress.
Ukusiza Izinjini Zokusesha ekuzulazuleni ibhulogi yakho kube lula kakhulu, ngincoma kakhulu ukuthi kulayishwe ifayela le- I-plugin ye-sitemap generator. Intandokazi yami empeleni inguqulo ye-beta - isebenza kahle futhi angikaze ngibe nenkinga. Njengoba ibhulogi yakho iku-subdirectory, lapho wakha imephu yakho yesayithi qiniseka ukuthi uvuselela ifayela lakho le-robots.txt ngendawo lapho ungayithola khona:
imephu yesayithi: http://netglobalbooks.com/blog/sitemap.xml
Uma ungena enkingeni, bhalisa ne- I-Google Search Console ukuthola amathiphu!
Ngubani uLinda Lee? Sikuphi isithombe? Zikuphi izithombe? Ukubhloga kungokuhlangenwe nakho okubonakalayo njengokufunda. Abantu bavame ukuxhumana kahle nabantu, hhayi imiyalezo. Anginaso isithombe ekhanda lami ngoba ngingumuntu obhala ngezidakamizwa… Nginaso lapho ukuze ukhumbule ubuso bami futhi mhlawumbe ungithembe kancane.
Ngingaphinde ngifafaze okuthunyelwe kwakho nge-clipart noma ngezithombe ukukuhlukanisa namanye amabhulogi futhi nginikeze ukuqonda okuthe xaxa kokuqukethwe kwakho. Sebenzisa izinhlamvu namaheda (h2, h3) ngaphakathi kokuqukethwe kwakho ukuze abafundi bakwazi ukuskena kalula.
Linda, wenza umsebenzi omuhle ngebhulogi elincane kangaka. Awudingi ukuphonsa konke lokhu kuthuthukiswa kuwo ngobusuku obubodwa - thatha isikhathi sakho. Kubonakala sengathi ukujabulela ukubhala kwakho futhi kuyamuntu futhi kuyafundisa. Yigcine futhi ungeze okumbalwa kwalokhu kudlula kwesikhathi - uzothola umfutho ekufundeni nasekutholakaleni kwenjini yokusesha.
Ngikufisela inhlanhla! (Kusuka Kubaba Ongayedwa!)
Ungayithola kanjani ibhulogi yakho
Uma ungathanda i-Blog yakho Kuboshwe, mane ulandele izinkomba ku- I-Blog Tipping Post.
Tags: ukubhloga kwebhulogiamathiphu ebhulogilindaamabhuku
Ukubhuloga Kwamabhizinisi: Imibuzo Eyishumi Ephezulu evela Ezinkampanini
Ukulandelela Ukubhuloga: Umqeqeshi Wami WeBhulogi nguShonnie Lavender
Jul 19, 2007 ngo-10: 35 PM
wow doug, ngilande leyo plugin ye-sitemap generator futhi iyesabeka, sengivele ngithumele imephu yesayithi ku-google, kubonakala ngathi isebenza kahle kakhulu kune-thanx futhi ukuthola izeluleko zakho… futhi ngenza ushintsho ekhasini lami eliyisiqalo, ngemuva kokufunda ekugcineni kwakho ukuthinta ama-blog, ngicabanga ukuthi ngiba ngcono 🙂
Jul 19, 2007 ngo-11: 16 PM
amadwala e-bbpress! ngiyabonga ngokushiwo uDoug!
Jul 20, 2007 ngo-7: 00 PM
Wow ngiyabonga ngalo lonke usizo nezixhumanisi ezinhle neziphakamiso.
Ngisebenze kwezinye zalezo namuhla futhi u-Im ngisebenza esithombeni, futhi ngivuselele ikhasi lami mayelana.
Ngizobe ngifaka ama-plugin owelulekile futhi ngenza ukungena kwebhulogi ngawe!
Ubuye kubhulogi lami manje.
Ngiyabonga futhi ngakho konke!
Jul 21, 2007 ngo-2: 09 PM
Wamukelekile kakhulu Linda! Ngibonga kakhulu ngokungingeza ku-blogroll - lokho kuyancoma impela !!!
Jul 26, 2007 ngo-2: 46 PM
Ngisanda kuthenga incwadi ngokususelwa kokukhethiwe kwakho.
Ngangingakaze ngizwe ngalo mfana futhi ngafunda izibuyekezo ze-Amazon futhi lolu uhlobo lwami lwencwadi. "Lindela okungalindelekile"
(Ngiye ku-eBay ngayithenga, ngiyaxolisa ngalokho) kepha ngiyibekile nakuwebhusayithi yami nayo iyathengiswa nge-Amazon.
Sep 28, 2007 ngo-3: 55 PM
URoger unezakhe i-blog yami, futhi! Ungumuntu ojabulisa abantu impela. Ngiyayithanda leya ncwadi, noma kunjalo!